Indlela eFundayo yokuFundela abaQalayo
Siye ngaphaya kwamanyathelo okuqala ukuba sibe yi-surfer, ngoko masenze ngokukhawuleza ukuphinda siphumelele.
Sixoxe ngezi zifundo ezintathu zokufunda ukukhwaza, ukufumana iingqondo, izixhobo kunye nezixhobo zokusebenza, kwaye sizenzele kwisithathu ngasinye. Inxalenye yengqondo yayinokuba yomelele, ingqondo phezu kwento kunye nokujongana nokutshatyalaliswa ekuqaleni.
Umzimba wukuthi kungakhathaliseki ukuba ufanelekile ukuba ucinga ukuba ungubani, kufuneka udonse ukufumana ukulungeleka kwe-surfing, kwaye indlela engcono yokwenza oku yayikuninzi kwiiseshoni ezifutshane.
Sagqiba ngenkulumo esheshayo kwixhobo zokusebenza zabalimi, kwaye xa sishiya wena, uhambe ukufumana loo bhodi yokuqala, ibhodi eya kuvula ubomi bakho, ibonakalise amaphupha akho, yenza ube ngumhlaba wehlabathi.
Ngoko ukhethe ibhodi lakho elitsha, kwaye lihle kwaye likhulu kwaye lide kunye neepaddles njengephupha. Ngethemba ukuba ubuncinane ubuncinane obungama-30cm kunawe, kwaye malunga nobubanzi njengamahlombe akho ukuba awububanzi. Kananjalo, unonke ulungele umanzi kwaye ulungele ukubetha amanzi abandayo. Musa ukulibala iibhotile ukuba kubanda kakhulu. Ezinye izinto ezimbini oza kuzifuna ukuba uqalise ziyi-wax, kunye ne-leash.
I-Wax yenziwe ngamanzi afudumele kunye namanzi abandayo, kunye neenguqu ezimbalwa (i-bumps bumps, i-super sticky njll njl) phakathi. Ubomvu amanzi, i-softer i-wax, kwaye ngaloo ndlela ifudumala amanzi aphezulu. Ufuna i-wax ibe yinto epholileyo xa amanzi ebanda ukuze ikwazi ukubunjwa nokuhamba ngaphantsi ukulungelelanisa kwisimo sakho, kwaye njengoko amanzi enza konke okusemandleni ukuyiqhwala, ngoko ukubunjwa okukhawulezayo kuvumela ukuphathwa kakubi.
Umjelo wamanzi ofudumalayo, ngokufanayo kufuneka ukuba ube ngumgangatho ongenamandla njengoko amanzi afudumele enza ukuba ithambile kwaye idlulele, kwaye oku kuhamba kakhulu.
Emva koko ufuna i-leash. I-leash yintambo edibanisa ibhodi yakho emagqeni akho ukuze xa usula, oya kuyenza, ngokuqhelekileyo okokuqala, ibhodi yakho ayihambi yonke indlela eya elunxwemeni kwaye ikuphoqele ukuba udide emva kwayo rhoqo.
Ngokuba uqala ukhethe i-nice big thick (8mm) leash njengoko awuyi kuba noxhala malunga nezinto ezifana nokudonsa kule nqanaba.
Ngoko ngoku ulungele, kodwa ngaphambi kokuba sitshitshise amanzi yinto efanelekileyo ukuyenza indlela yakho 'yokunyusa' kwisantla kuqala.
Dweba inkcazo yebhodi ye-surfboard entlabathi. Ungasebenzisa ibhodi yakho kunye, vumela ukuba iifom zihlale zijonge kwisanti.
Emva koko umnqweno wakho uvela kwindawo yokulala phantsi ukuya kwindawo yokuma kwelinye lentshukumo, ngamanye amagama, ngaphandle kokuguqa ngamadolo nakweyiphi na isigaba. Le ngenye yezona ntshukumo ezibalulekileyo ozifuna ukuzenza. Ukuba ulungele ukulungiswa ngokukhawuleza kufana nokukopela okukhulu kwi-curve yakho yokufunda kwaye uya kuphucula ngokukhawuleza. Ngoko ulele phantsi esiswini sakho faka izandla zakho phantsi njengokungathi wenze i-push-up.
Gxininisa iingalo zakho kwisithuba sokunyuka, phakamisa ibhola yakho ebhodini kwaye uphendule imilenze yakho phantsi kwakho ngesinye isigidimi esichukumisayo uze ube phantsi kwesifuba sakho. Inyawo lakho lokubuyela kufuneka libe phezu kweendawo zokugcina zebhodi kwaye phambi kweenyawo ujikeleze phakathi kwebhodi, kwaye kufuneka ube kwindawo edibeneyo. Kule nqanaba izandla zakho zishiye ibhodi kwaye umile. Khumbula ukuba unyawo lwakho lomva lusetyenziswa ukuguqula ibhodi kunye neenyawo zakho zangaphambili kusetyenziswa ukukhokela ibhodi yakho.
Akungabazeki ukuba uya kubonakala njengesidenge kuselunxwemeni, ukwenza njalo ngokuphindaphindiweyo, kodwa usithembele, kubalulekile ukuba wenze oku kuhamba ngokubanzi kangangoko kunokwenzeka, ukwenza izinto zibe lula xa ephakathi kwamanzi.
Xa uphantsi kwamanzi ibhodi yakho iya kuziva ngathi isilwanyana esiphila ngaphantsi kwakho, sihamba kwaye sithuthuzela ngokuhamba kwamanzi. Uza kubamba amanzi amhlophe ngokunjalo, ngoko le nxalenye yomshumbulwano oqukethe imithwalo yomoya, ingeyona indawo yokuzinza. Emva koko xa uphume emanzini, kunye nawe udibanise kwaye ubambe ingqungquthela, ukunyakaza kuya kuba ngokuzenzekelayo kwaye uya kuba nothando lobomi. Ukuba ume kunye nawe ngasekhohlo ekuhambeni uhamba unyawo lwezendalo, kwaye ukuba ume ngeenyawo zakho zokunene uye phambili.
Khumbula ukuba into esiyicetyayo ngaphambili ihlala ifakwe kwisantya sakho seenyawo, ngenxa yoko ayiyikuxubha kunye neenyawo zakho ngelixa ufika ezinyaweni zakho okanye uphakamise.
Ngoko kunjalo. Unayo izixhobo zakho, uyazi indlela yokufikelela ezinyaweni zakho, unalo uhlobo olulungileyo lomtsalane olunokubamba amaza ngokulula kwaye zonke iinkqubo ziyahamba. Ngoku yisikhathi sokuphuma apho kwaye ubambe ezimbalwa, qalisa ukuvakalelwa konke, kunye nokusebenza kwimpilo yakho. Ngoko ngoku kufuneka uqale ukuqonda ubuxoki bomhlaba, okanye ubuxoki bamanzi.
Ngoku siza kukufundisa bonke ngeentlobo ezahlukeneyo zamagagasi kunye namabhendi, kwaye apho bekuya kuba yindawo efanelekileyo kuyo ukuba uphume kwaye uyinike.
Abaqalayo abaqalayo basasaza kuba yi-break breathing break break, elunxwemeni elinesihlabathi, ngaphandle kwamadwala. Ulwandle olungenamntu obuninzi luya kuba luhle, njengoko ungafuni ukubetha abantu abanebhodi ye-surfboard engafanelekiyo, okanye ukuzithoba ngabanye ibhodi. Kwakhona kufuneka ufumane ulwandle olungenawo amanzi angacacileyo, kuba oko kuya kwenza ukuba amaza 'alahle' ngokukhawuleza, awakulungele ukuba aqalayo. Ibhantshi elincinci, isanti emhlophe kunye namaza athambileyo.
Amagquma ayenamatye, okanye aphule phezu kwamanzi, kufuneka agwenywe ngoku. Bavelisa amaza angcono kakhulu, kodwa aphule nzima kwaye aphule kwiindawo ezikhuni (amatye / umkhombe) kwaye anokukhokelela ekubanjeni zonke izinto ezinobungozi obukhulu. Ziza kubafowuni abanezakhono nabanobuchule kuphela, i-surfer oyifumaneka kungekudala kwizakhono oza kufunda kwi-surf the beach. Ukuba awuqinisekanga ngomsinga ofuna ukufunda ukutshiza, buza ivenkile yendawo ye-surf, umgcini wezilonda, okanye i-surfer yangingqi.
Enye yezona zinto zikhubekiso kule nto sifunda kwinkqubo yokungena kwi-surf. Uninzi lwabantu alugcini ukuba lunqunywe, kwaye iingalo kunye namagxa abo ziba nzima kwaye ziqhwala emva kwemizuzu embalwa yokupakisha. Ewe, sisisinyathelo esisodwa phambi komdlalo sele sele, njengokuba ibhodi oyikhethileyo ngumshini we-paddle, okhethwe ngokucophelela ukuncedisa kangangoko kunokwenzeka nge-paddling yakho. Isicatshulwa sesibini ngokubhekiselele kwi-paddling, njengoko kushiwo ngasentla, ukufikelela kwi-paddle kangangoko kunokwenzeka ngabantu, imini nangemini.
Uhambo olujikelezayo olubhekise olwandle kunye nesantya esithile. Xa ulala ebhodini lakho, ejongene nebhantshi, umtshini uya kukhwela emva kwakho. Injongo yakho kukufumana uhlobo lokuhamba phambili, ukuze ukwazi ukulinganisa isantya sokutshatyalaliswa komtsalane, kwaye ngoko uyibambe. Iqhinga kukugada ngokukhawuleza njengoko unakho. Abanye abantu bahamba ngokukhawuleza, kwaye vumela umtshangatshi uwabambe, kodwa ukuba unobunzima obunzima kakhulu unokufumana ithuba lokufumana umtsalane. Indlela eya kwinqanawa kukulala ebhodini kunye nokusebenzisa iingalo zakho ngendlela efanayo yokubhukuda 'ukushaywa kweqhwa. Unokwenza oku kuselunxwemeni ngaphambi kokuya kwi-surf ngokusula ingalo enye phambili kuze kube yilapho iya kuhamba kwaye uyibuyisele esikhwameni sakho kwaye ulula isandla esithile. Khumbula ukugcina izandla zakho zincincile xa ulungelelanisa okwenene, kuya kukunika i-scoop. Kwakhona, gcina intloko yakho kwaye ubeke isandla ukuze ukhangela apho uhamba khona.
Isalathiso esikhulu sesibini, ongeke uve okanye ufunde apho, ukukhwela amaza akho okuqala kwisisu sakho.
Abafundisi abaninzi besikolo kunye nabakhokeli beziko lokufunda bazimisele ukufika ezinyaweni zenu (UYA KUFIKA kwisifundo sethu sokuqala, siqinisekisiwe) ukuba bathambekele ekuphuthumeni iifom zokuqala zokufunda. Ngoko, ngenxa yokutshangatshangiswa kwakho kokuqala, i-paddle kanzima, uyibambe, kwaye ugibele umtsalane uze ukwazi ukulala ngesisu sakho. Yibambelele kwimilayezo yokuzinza, kwaye ujongele uvakalelo lomkhonto ohambayo. Phakamisa amagagasi ayishumi njengaye, hamboza amaza angamashumi amabini, ujabulele ukukhawuleza kwejubane, kwaye uzive ukuba umtsalane uvakalelwa ngaphantsi kwakho. Qhubeka ujikeleza amagagasi elele phantsi uze uzive ukhululekile kwaye ukhululekile nalo. Ngokwenza oku uya kufunda, ngokuzenzekelayo, indlela yokulala ngayo kwi-surfboard yakho. Abanye abantu bakholelwa ukuba ukulala ekude ebhodini kuyindlela ehamba phambili, ukuze banokuphelisa amathuba okuphunga imphunga. Oku kuyinyaniso, kodwa ukuba uxoka kumva kude awuyi kukwazi ukufumana nayiphi na inkqubela phambili okanye uhamba phambili. Xa ulungelelanisa, kufuneka ube phakathi kwebhodi yakho kunye neempumlo zebhodi lakho kufuneka zibe ngamasentimitha ambalwa ngaphandle kwamanzi. Umtshini ogqwesileyo ukuqonda indlela echanekileyo yokuhamba, kukujonga ezinye i-paddle paddle, ubone ukuhamba kwazo, kwaye ulandele. Ekufakeni, ukulingisa kukuthabatha, ngoko jonga i-surfers enhle uze ukopishe konke abakwenzayo. Baye bathatha iminyaka ukuze bafumane kakuhle, ngoko i-leapfrog i-curve yokufunda uze ufike phambili.
Xa ubambe ingqungquthela, uzame ukuwela ezinyaweni zakho ngokusebenzisa indlela 'yokunyusa' ichazwe ngasentla. Yonke ihamba kakuhle, kwaye unomfanekiso wokulinganisela kwaye uqonde ukuguqulwa kokuhamba ngaphantsi, uya kuba, kwaye uya kuba yi-surfer.
Uziva ulungile, akunjalo?
Ngaloo ndlela uqala ubomi bakho njenge-surfer. Ukuba uthe wathatha ixesha lakho, kwaye ungakhange ugijime ukuze ufike kule ndawo, kuya kuba yinto evelele kakhulu, kwaye ukuqala kwentshiseko yokuphila.
5 Abaqhamuzi abadumileyo benza iifolo
Indlela Yokufumana I-Photo Surfing Action Photograph
IsiKhokelo sikaMat Biolos Kuwo wonke umntu oPhezulu weBhodi ezintathu.
Iibalulekileyo zokuqala kwi-History of Radio
Biography ka Niall Horan
Isikhokelo kwi-Movie Classic ImiGangatho kunye nezitayela